Window7နဲ့ Word Processing File တွေရဲ့ Meta Info တွေကို Edit လုပ်ချင်ရင် ~ မျိုးကို
Window7နဲ့ Word Processing File တွေရဲ့ Meta Info တွေကို Edit လုပ်ချင်ရင်
07:54 Technique, Window7No comments
ကျွန်တော် File ထဲက Personal Information တွေဖယ်ရအောင် ဆိုတဲ့ Post လေးတုန်းက Meta Data တွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် လိုအပ်တာကို ယူနိုင်စေဖို့ Page လေးတစ်ခုညွန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုပြောမှာက Window7မှာ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ Word, Excel နဲ့ Power point File တွေကို Edit လုပ်လို့ရပါတယ်။
လုပ်ကြည့်ချင်ရင် ကိုယ်တို့ရဲ့ Word File လေး တစ်ခုကို Win7ရဲ့ Window Explorer ထဲမှာ ထားကြည့်ပါ။ File ပေါ်လေးကို Highlight ထားကြည့်တဲ့အခါ Window ရဲ့ အောက်ခြေမှာ သူ့ရဲ့ Meta Data Information လေးတွေကို ပြနေမှာပါ။
ကဲ ဘယ်လိုသော Third Party Program မှ မလိုအပ်ဘဲ ဒီ File တွေရဲ့ Meta Info တွေကို Edit လုပ်လို့ ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ Save လိုက်ပါ။ ဒါပါပဲ.
Amys Animal Hair Salon - Fluffy Cats Makeovers free download for android [Simulation]
Adobe Photoshop: неразрушающая обработка. Мастер-класс (2018)
How to join Microsoft’s Early App Preview Program
How to Avoid Emotional Spending
Linksys Velop review: What do you get from the most expensive mesh WiFi system?